प्रमुख समाचार – Kavrepati
December 7, 2021	प्रमुख समाचार 0
बैतडी : बैतडीमा जिप दुर्घटना हुँदा चा। जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा थप एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । पाटनबाट सकारका लागि हिँडेको से१ज ८८८ नम्बरको जिप पाटन नगरपालिका-१ सकार खोलामा दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको हो । मृतक मध्ये दुई जना नव विवाहित जोडी भएको प्रहरीले …
December 5, 2021	प्रमुख समाचार 0
एक डाक्टरले आफ्ना दुई सन्तान र श्रीमतीको ज्यान लिएका छन्। भारतको उत्तर प्रदेशको कानपुरमा यस्तो घटना घटेको भारतीय सञ्चारमाध्यहरुले जनाएका छन्। प्रहरीका अनुसार डा. सुशील कुमारले आफ्ना दुई सन्तान र श्रीमतीको ह’ ‘त्या गरेका हुन्। उनले घटनापश्चात आफ्ना भाइलाई प्रहरी बोलाउन म्यासेज गरेको बताइएको छ। प्रहरी त्यहाँ पुग्दा डा. सुशील …
November 29, 2021	प्रमुख समाचार 0
काठमाडौ । एकाबिहानै बुद्ध एयरको विमान ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको छ । नेपालगन्ज विमानस्थलको धावनमार्गमा साँझ बुद्ध एयरको जहाज अवतरण गर्ने क्रममा जनावरसँग ठो’क्कि’एको थियो । यस्तो अवस्थामा विमान ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको छ । नेपालगञ्ज विमानस्थल स्रोतकाअनुसार सानो खालको जनावरसँग जहाज ठो’क्कि’एको पाइएको छ । यसअघि अघिल्लो महिना सीता एयरको जहाजमा …
November 24, 2021	प्रमुख समाचार 0
अमेरिकामा गाडीको ठ’क्करबाट एक जना नेपाली महिलाको ज्यान गएको छ । अमेरिकाको मेरिल्याण्डको प्रिन्स जर्ज काउन्टीमा गाडीको ठ’क्करबाट ४० बर्षीया नेपाली महिला बर्षा खड्का प्रसाईको ज्यान गएको हो । सपर्स वे मा मेडिकल सेन्टर ड्राइभ पार गर्न लाग्दा प्रसाईलाई गाडीले ठ’क्कर दिएको थियो भने गाडी सहित घ’टनास्थलबाट फरार चालकलाई पछि …
November 23, 2021	प्रमुख समाचार 0
काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सको ट्विन अटर विमानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रुकुमको चौरजहारी उडान भर्ने अनुमति पाइसकेको थियो । दिउँसो ३ बजे उड्नुपूर्व यात्रु विमानमा बसिसकेका थिए ।विमानका पाइलट ककपिट छिरेपछि एयरहोस्टेजको मधुर आवाज निस्कियो– अब हामी गन्तव्यतर्फ उड्दैछौं । कृपया सुरक्षाका लागि सबैले बेल्ट बाँधिदिनुहोला । ट्विन अटर विमानका आठमध्ये …
November 15, 2021	प्रमुख समाचार 0
काठमाडौं । इथियोपियाली विमान दुर्घटना भएको २ वर्षपछि अमेरिकी विमान निर्माता कम्पनी बोइङले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । बोइङले मृतकका परिवारको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरिसकेको छ । १४९ यात्रु र ८ चालकदलका सदस्यको १० मार्च २०१९ मा विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । बोइङको …
काठमाडौं– कैलालीको लम्कीचुहा–१ स्थित बडुवाल परिवार अहिले शोकमा छ। कारण– कात्तिक २३ गते मंगलबार राति टीकापुरमा २२ वर्षीय भूपेन्द्र बडुवालको ज्या’न लि’ईयो । उनलाई आ’परा’धिक गि’रो’हले राति ९ बजे खु’कु’री प्र’हा’र गरी ह’ ‘त्या ग’रे’को थियो। बडुवाल लम्कीचुहा नगरपालिका–१ का बासिन्दा हुन्। बडुवालको ह’ ‘त्या टीकापुरस्थित सिद्धार्थ होटेल नजिकै भएको …
November 14, 2021	प्रमुख समाचार 0
वरिष्ठ साहित्यकार एवं चर्चित कवि प्राज्ञ विजय बजिमयको आज निधन भएको छ । शारीरिकरूपमा जन्मजात अपाङ्ग भए पनि कविता, कथा, गीत, गजल तथा मुक्तकका माध्यमबाट नेपाली साहित्यलाई विशिष्ट योगदान दिनुभएका बजिमय २०१४ साल चैत २३ गते पोखराको मोहरिया टोलमा जन्मनुभएको थियो । विसं २०२९ मा ‘प्रजातन्त्र’ नामक कविताबाट लेखन सुरू …
दोस्तीको नाममा गद्धारी : यसरी भयो भुपेन्द्रको ह,त्या ?
काठमाडौं : कात्तिक २४ कैलालीको टीकापुरमा च’क्कु प्र’हार गरी युवकको ह,त्या गरेको आ’रोपमा ८ जना प’क्रा उ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले लम्कीचुहा नगरपालिका–१ का भुपेन्द्र बडुवालको ह,त्यामा संग्लन भएको आ’रोपमा ५ जना र अन्य तीन जनालाई पनि प’ क्राउ गरिएको बताए । …
November 13, 2021	प्रमुख समाचार 0
रातको करिब ८ बजे तिर आफ्नै साथीलाई के भयो भनेर घरबाट निस्किएका भुपेन्द्रलाई तिनै आफ्नै साथिले सडकमा दौ’डा’ई दौ’डा’ई ह’त्’या गरेका हुन। भुपेन्द्र उनिहरुबाट भाएर बाच्न निकै प्रयास गरे पनि उनी सफल हुन सकेनन । उनलाई बिच सडकमा आफ्नै सा’थि’हरुले खु’कु’री प्र’हा’र ग’रि ह’त्’या गरेका हुन । भुपेन्द्रलाई साथी दुख …